လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - အလွဲသုံးစားမှုမြင့်တက်သောစျေး - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ညစ်ညမ်းမှုကိုနှေးကွေးစေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု (DE) သို့မဟုတ် anorgasmia ကိုကုသရန်အတွက်အကြံပေးချက်များ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: အပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း Porn ၏စက်လှေကားစျေး
By ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S က
မာကုတစ်ဦးလက်ထပ်, 35 နှစ်အရွယ် realtor ဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ဇနီးဂြဲ, လမ်းအပေါ်အပတ်တိုင်းရက်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲသူတစ်ဦးဆေးဝါးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်သည်အထိကြီးကြောင်းသတင်းပို့နှင့်မာကုဖြစ်ပျက်သေချာသည်မဟုတ်။ သူကသူတို့လုပ်မယ့်ခဲ့ကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာအိပ်ရာထဲမှာခုန်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေခဲ့သည်ကိုသိသောကြောင့်, သူ Janet အိမ်ပြန်ခဲ့ရက်ပေါင်းမျှော်လင့်လေ့ရှိတယ်။ တောင်မှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်နှစ်ခုအမြဲ lovemaking ဘို့အချိန်နှောင်းပိုင်းတွင်ညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနံနက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်မရှိတော့။ Janet နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်း, မာကုအော်ဂဇင်ရောက်ရန်ရုန်းကန်ရသောအခါဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ သူကပင်ဖွင့်နှင့်အတူအမှုအရာကျော်ရရန်, orgasm ကိုအတုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမာကုကိုနားလည်မပေးနိုငျသူ Janet သည့်အပေါ်အခါသူကမှန်မှန်မကသူ့အကြိုက်ဆုံး porn ဆိုဒ်များ-တစ်ခုခုပေါ်တွင်တွင်းသို့လာသောအခါသူသည်အဆင်သင့်ဆန္ဒရှိနှင့်နိုင်ကြမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လမ်း-ဒါပေမဲ့သူပိုင်ခွင့်ရှိအစစ်အမှန်အရာလေရဲ့သောအခါထိုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး သူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌။ မာကုကိုမိမိဇနီးနှင့်အတူ "ပျင်း" သည်မဟုတ်ဟုထဲမှာအတော်လေးရှင်းပါတယ်, သူသည်သူမ၏တွေ့ပါဆက်လက် "sexy စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်နှိုးဆွ။ "
မာကုနှောင့်နှေးသုက် (DE), လူအများစုနားလည်သဘောပေါက်ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်းပြဿနာတစ်ခုကနေခံစားနေသည်။ DE ၏ရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်သည်: အော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့သာမန်ထက်ပိုကြာ; သာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတဆင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း, လူအပေါင်းတို့မှာအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ "ကြာကြာတည်တံ့" ယေဘုယျအားဖြင့် virility ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုရှုမြင်သောကြောင့်ပထမဦးဆုံးမာကုမှာစိတ်ထဲမခဲ့ပါဘူး။ သူဟာယခုနှစ်သက် Janet မှာပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်စဉ်းစား, တစ်ဦးကိုနှစ်သက်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကတက်တဘက်သတ်။ သူနဲ့အခွားသူမြားစှာရှာဖွေတွေ့ရှိသကဲ့သို့ကံမကောင်းစွာ, တကယ်ကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိ အကောင်းတစ်ဦးအရာများ၏လွန်း.
အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ဝသကဲ့သို့အပါအဝင် DE ၏မြောက်မြားစွာဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ, ရှိပါတယ်: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်း / ချို့ယွင်း; အော်ဂဇင်ပပျောက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်သိကြသည်ထားတဲ့ SSRI-based စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏အသုံးပြုမှုကို; စိတ်ပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းယောက်ျားအာရုံနိုင်သည့်၏ဘဏ္ဍာရေးစိုးရိမ်သို့မဟုတ်မိသားစုအားလုံးကမောက်ကမဖြစ်မှုကဲ့သို့ဖိအားနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ။ သို့သော်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏တဦးတည်း ပို. ပို. မှတ်တမ်းတင်အကြောင်းမရှိ Over-ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူ-တချို့တစ်မူလတန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်အဖြစ်-ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောမာကုအဖြစ်အသက်တာ၏ချုပ်ထဲမှာမဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားများအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိတရားခံပုံရသည်။
ဒါဟာလက်လှမ်းတတ်နိုင်နှင့်နေအိမ်ကွန်ပျူတာများ, Laptop, စမတ်-ဖုန်းများနှင့်ကျနော်တို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ဆောင်အခြားမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ဝင်ရောက် ပို. ပို. ဂရပ်ဖစ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဆူနာမီ, အခြို့အဘို့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေးမျိုးမသာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုပုံပေါ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများ , ဒါပေမယ့်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ တစ်လမ်းအတွက်ဤတှငျအဘယျအများအပြားအတည်ပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ ကုသမှုကိုလယ်လိင်၏များစွာသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးဆက်များအကြားအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာ-ကြောင်းလူသိများခဲ့ကြပြီး porn စွဲ is လျှော့ချသို့မဟုတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအတွက်ပင်လည်းမရှိခဲ့ချေစိတ်ဝင်စားမှု အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် / သို့မဟုတ်ရေရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အတူ။ ဤပြဿနာကိုရိုးရိုးကြောင့်မူလတန်းဆက်ဆံရေးဟာပြင်ပမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ရဲ့ကြိမ်နှုန်းဖို့မရှိ၏ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးအမြင်အာရုံသစ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်လှည့်-အပေါ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုပြီးဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြင်အာရုံနှင့်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်သည့်ထက်သည်သူ၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖွယ်အချိန်ကျော် porn မှ masturbating နှင့်ကူးယဉျသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏ 75% သုံးစွဲသူ (ငယ်ရွယ်သော, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအဆုံးမဲ့ပုံရိပ်တွေ) ဖြစ်ပါသည်, သူ၏ခေါင်းကိုအတွက်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပစ္စည်းအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေး။ အဘယ်အရာကိုယခုကြှနျုပျတို့တှေ့မွငျနေကြသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်တငျပွကွောငျးအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပြုလုပ် DE သို့မဟုတ်ယင်း၏ပိုကောင်းလူသိများဝမ်းကွဲ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ဖြစ်လိမ့်မည်။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရလူဘုံတိုင်ကြားချက်များပါဝင်သည်:
သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမပြဿနာညစ်ညမ်းနှင့်အတူစိုက်ထူသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ရရှိရှိသည်, သို့သော်ဆန္ဒရှိအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူလူတစ်ဦးအတွက်, သူတို့ကတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရုန်းကန်။
သူတို့ဟာလိင်ရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ကြသည်, ဒါပေမယ့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိရှည်တွေအများကြီးကြာနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သူတို့ disengaged ပုံပေါ်ကြောင်းညည်းညူ။
သူတို့တစ်တွေအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူထိနျးသိမျးနိုငျ, ဒါပေမယ့်သာမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ကလစ်ပ် replaying အားဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ-ပေမယ်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ဆီသို့တစ်ဦးလိုအပ်သော tool အဖြစ်တစ်ခုရံဖန်ရံခါ addendum အဖြစ် porn-မဟုတ်စောင့်ကြည့်မှာသူတို့ကို join ဖို့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိတ်ဖက်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သူတို့က ပို. ပို. ပို. ပြင်းထန်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရှာဖွေတာ, အမှန်တကယ်လိင်ဖို့ "porn လိင်" ကြိုက်တတ်တဲ့။
သူတို့ကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နှင့်ကှာခံစားချက်တွေကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက် (စသည်တို့ကို porn, မြင်ကြပုံများ, မှာရှာဖွေနေအချိန်ပမာဏ), ကနေလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ပါပြီ။
သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သူတို့နှင့်တူခံစားရရန်အစဖြစ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ "အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ "
ပြည်သူ့လွန်းစားတဲ့အခါ, သူတို့ကအစားအသောက်; အဘယ်အရာကိုလွန်း Porn ကော?
ဒါဟာ porn-သွေးဆောင် DE ခံစားနေရသူကိုလူတိုင်းကအပြည့်အဝ-လွ porn စှဲလမျးသူကြောင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအလွန်အနည်းဆုံး porn စွဲရန်ရှေ့ပြေးအဖြစ်ရှုမြင်ရပါမည်။ porn ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ရေရှည်မိတ်ဖက်ပြဿနာတက်ရှင်းလင်းရေးလျှင်ကြည့်ဖို့ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတဲ့ငွိမျးစနှေငျ့စဉျးစားသငျ့နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်သူကိုတစုံတယောက်သောသူသည်။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်, ထိုကြီးမြတ်ပါတယ်။ ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအဲဒီနောက်ကွာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှောင်ပါလျှင်, သူ့လိင်ဘဝချောဖြစ်သင့်သည်။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ abstinence ၏ 30 ရက်ပေါင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးအမှုအရာထမလျှင်, တစ်ဦးချင်းစီမူလအစအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအကြောင်းရင်းများအတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်လိုလျှင်ထိုပြဿနာကိုညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးချင်းစီအားလုံးစှဲကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစွဲကပိုပြီးခက်ခဲကြည်ညိုနှင့်အတူလိင်ကနေအပျော်အပါးများအပါအဝင် "သဘာဝ" အပျော်အပါး, တွေ့ကြုံခံစားစေသည်ဟုနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက် "rewires" ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်။ ကဲ့သို့သောသူပြဿနာကိုနေ့ချင်းညချင်းကိုယ်နှိုက်ကကုစားဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ တကယ်တော့, neuroscience ကိုပြောထားသည် ဒါကြောင့်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာနိုင်ပါတယ် ပုံမှန်ဖို့, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအားဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်အခါဦးနှောက်အတွက် dopaminergic သို့မဟုတ်အပျော်အပါးလမ်းကြောင်းများအတွက်။
အကျိုးဆက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖန်ဆင်းတော်ကတိတော်များရှိနေသော်လည်း porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်
တဖြည်းဖြည်းကြည့်ရှုခြင်းထက်ပိုသော, arousal ပြင်းထန်သော, သို့မဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ
porn အသုံးပြုမှုနှင့် တွဲဖက်. မူးယစ်ဆေး / အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး / အရက်စွဲ relapse
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထက်ကလူအဖြစ်ကသူတို့ကိုကြည့်ရှု, တကျွန်းတနိုင်ငံသား objectification တိုးလာ
အမည်မသိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်-ups အဘို့အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. ရန် Two-ရှုထောင်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာရှာတွေ့မှစက်လှေကား
သူတို့မပျော်ရွှင်နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ဖျော်ဖြေဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏နောက်ခံအရင်းအမြစ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြည့်ရှုကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝမ်းနည်းစရာ, porn စွဲမကြာခဏအကူအညီရှာတွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ အခြားသူများကရိုးရိုးလည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်။ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကူအညီရှာအံ့သောငှါပြုကြသောအခါ, သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းရဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအကူအညီနှငျ့မဟုတ်ပြဿနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အလားအလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ related penile ယားယံအကြောင်းကိုမေးရန်, သို့မဟုတ် "ဆက်ဆံရေးမျိုးပြဿနာများအတွက်အကြံပေးခြင်းရှာဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ်တိုင်က-သွားရောက်လည်ပတ်ရှာကြာလော့။ "ဝမ်းနည်းစရာ, များစွာသော porn စွဲညစ်ညမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်ဆွေးနွေးခြင်း (သို့မဟုတ်ပင်အကြောင်းမေးခံရ) ခြင်းမရှိဘဲကျယ်ပြန့် psychotherapy တက်ရောက်ရန်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အမာခံပြဿနာမြေအောက်နှင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။
အားလုံးပညာရှင်များ arousal / အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ-အတွက် psychotherapy, လိင်ကုထုံးနှင့်အတူယောက်ျားကုသနှင့်ဆေးဝါး porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လယ်ကွင်း-ရှိသည်။ porn စွဲအဝတ်မခြုံဘဲနေလျှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လိုင်စင်လိင်စွဲကုသမှုအထူးကုနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အကြံပေးခြင်းမကြာခဏစုံတွဲများကုထုံး, အုပ်စုတစုအလုပ်နှင့်တစ်ဦး 12-အဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူ program နဲ့အသုံးဝင်သည်မှန်လျှင်, ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လိုအပ်ပါသည်။ ကြောင်း porn စွဲမှတ်ထားပါရန်အရေးကြီးပါသည်ကအများဆုံးမကြာခဏကျော်လွှားဖို့ရေရှည် psychotherapy နှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုနောက်ခံစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤ psychotherapy နှင့်ထောက်ခံမှုဟာတင်ဆက်ထားပါတယ်အပြုအမူပြဿနာကိုဖော်ထုတ်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ထားပြီးပြီးမှသာအောင်မြင်နိုင်မည် ။